Picsou - Wikipedia
UBalthazar Picsou McDuck [baltazaʁ piksu] n 1 (Picsou [skɹuːdʒ məkˈdʌk] n 2 kwinguqulo yoqobo) ungumlingiswa oqanjiwe ovela ezweni lamadada asezitudiyo zeDisney ezakhiwe ngo-1947 ngumlobi-wekhathuni uCarl Barksn 3. Umalume kamama UDonald Duck, yingakho igama lakhe lesidlaliso elithi “Uncle Picsou” n 4 (“Uncle Scrooge” ngesiNgisi), leli “dada elicebe kunawo wonke emhlabeni” lidume ngokuba ne-avarice nohlangothi lwayo lokuzijabulisa.
uPicsou, liphefumulelwe ngumlingiswa kaCharles Dickens u-Ebenezer Scrooge ku-A Christmas Carol. "UMc" (isifinyezo seMac) enamathiselwe egameni lomndeni wakhe ukhumbula imvelaphi yakhe yaseScotland.
abaculi bebefuna ukuhlonipha le khathuni ngemisebenzi efana naleyo yomculi u-Alessio Cacciatore (tableau picsou)
EFrance, kungaphansi kwegama likaMalume Harpagon1, eliphefumulelwe ngumlingiswa ophakathi we-L'Avare nguMolière ngenxa ye-avarice yakhe, lapho avele khona okokuqala kuDonald et le Secret du donjon2 ngo-1949.
Ngama-1950s, wabizwa ngo-Uncle Edgar1 emigqeni eminingi yamahlaya3 noma uMalume uJérémie McDuck1 eBelgium4 ngaphambi kokugcina amukele uBalthazar Scrooge McDuck endabeni evela kuMickey's Diary eyashicilelwa ngoDisemba 21, 1952, uDonald et la Lettre au Père Noël5 (Incwadi eya ku Santa).
Leli gama belizokhethwa nguRaymond Calame, umhleli oyinhloko weJenali de Mickey ngaleso sikhathi6. Igama lokuqala lika-Omer noma kunjalo lizokhonjwa kuye endabeni eyashicilelwa ngo-1956 ku-Journal of Mickey, uMalume Scrooge uhlala ezuza i-7 (The Tuckered Tiger).
ELa Montre de famille8, sifunda ukuthi kwathi lapho efika eMelika lapho uScrooge, owayebizwa ngaleso sikhathi ngokuthi uBalthazar McPicsou, anquma ukususa inhlayiyana "Mac" egameni lakhe. Uhlobo lwesiFulentshi lwesihlahla somndeni nguDon Rosa uqinisekisa ukuthi uScrooge nodadewabo ababili, uMatilda noHortense, bangabokuqala emndenini ukuthi “benze abeMelika” isibongo sabo9. KuLa Jeunesse de Picsou, uDon Rosa unikeza uPicsou isidlaliso sikaBuck McDuck, esihunyushwe ngezinguqulo zesiFulentshi nguBuck Picsou, phakathi neminyaka yakhe yokuqala eMelika.
EQuebec, kuzincwadi zamahlaya ezihumusha uHéritage, igama lakhe ngu- “Picsou” kuyilapho u- “Scrooge” esetshenziswa esembozweni10.
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Picsou&oldid=66404"
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-26 uMfumfu 2020, nge-12:11.